Cabdullaahi Yuusuf: Goormaad itoobiya maya dhahday?
Hogaamiyaha ayaa hada umuuqda nin wali ku dhagan xiriirki uu lalahaa taliska itoobiya rubac qarni. Wuxuu u arkaa talo wanaagsan Itoobiya inay hubka ka dhigto dadka Soomaaliyeed, ka dibna ay Itoobiya gacanta ku dhigto bulshada yar. Ujeeddadu waa in la soo afjaro colaadda labada ummadood.
Aqoonyahanno badan ayaa aamminsanaa in Cabdullaahi Yuusuf uu qalqal gelinayo Itoobiya, laakiin markii uu Hogaamiye noqday wuxuu laaban lahaa dareenka shacabka isagoo Hogaamiye ah. C / Laahi Yuusuf maanta wuu gaadhay himiladiisii, walina wuxuu daacad u yahay Itoobiya ama saaxiib buu leeyahay. Waa arrin u baahan fasiraad qoto-dheer oo uu u baahan yahay Aqoon-yahanka aan kor ku soo sheegay.
Maanta, Hogaamiyaha Soomaaliya wuxuu heystaa fursad qaali ah oo uu ugu sheegi karo asxaabtiisa siyaasadeed inuu go’aan adag ka qaatay Baarlamaanka, badankooduna ay diideen keenista ciidamada safka hore. Waana inuu yiraahdaa. Waan ka xumahay markaan maqlo in sharci dajintu ku diiday. Kuma necbi adiga, dadku way kaa soo horjeedaan. Marka halkii aan ka bixi lahaa, waan kaadiyaa oo soomaalida dhinac baan dhigayaa.
Shacabku maanta waxay u nugul yihiin aqbalaada Hogaamiyaha ee natiijada Baarlamanka, waana talaabada kaliya ee loo qaadi karo wax ka qabashada inta ka hartay dhibaatada Soomaaliya. Haddii Madaxweynuhu ku qanci waayo go’aankaas, waa waddanka hoggaaminaya dagaal cusub. Xaaladda ayaa umuuqan karta dagaal udhaxeeya laba qaybood oo kala ah mid taageero kahelaya itoobiya oo doonaysa inay wadanka lawareegto iyo kooxda kale oo diidan in itoobiya loo gacan galiyo soomaaliya. si loo hirgaliyo Istiraatiijiyadda Itobiya.
Markay labada dhinac isku dhacaan, waxa ugu xoog badan ayaa noqon doona qoyska. Waxaanse kula talin lahaa Hogaamiyaha inuu noqdo hogaamiyaha kooxda Somali-diidka ah ee Itoobiya u gacan gelinaysa.
Habeenkii la dooranayey Afhayeenka Baarlamaanka, Soomaalidu waxay u qaybsameen laba qaybood. Saaxiibada Itoobiya iyo saaxiibada dalkooda hooyo. Waxaa hormuud u ahaa Shariif Xasan Sheekh Aadam oo noqday afhayeenka baarlamaanka. Waxay ahayd habeen ay soomaalidu ka badbaaday.
Khadkii la doortay wuxuu ahaa inuu matalo danaha Soomaalida. Go’aankii ugu dambeeyay ee Baarlamaanku qaatay wuxuu tusaale u yahay in Shariif wali qadka ku jiro. Ma uusan qarin sida uu uga soo horjeedo soo gelitaanka Itoobiya ee Soomaaliya, isagoo muujiyay aragtidiisa maalmo ka hor inta uusan baarlamaanka furmin. Wuxuu sidaa u yeelay si uu dadweynaha u ogeysiiyo halka uu taariikhda gali doono.
Anigu amaani maayo shakhsiyadda Shariif laakiin waxaan taageersanahay fikirka siyaasadeed ee uu hadda matalayo, waxayna ku noqon doontaa taariikhda Soomaalida. Macallin jaamacadeed ayaa ii sheegay in Shariif Xasan uu badbaadiyey boqolaal askari. Issin oo reer Puntland ah wuxuu yiri Shariif Xasan wuxuu mudan yahay in loogu magac daro caruurteena, maxaa yeelay hadii maanta uu sidoo kale aaminsanaa in safka hore la keeno, wax fikrad ah kama qabno sida mustaqbalka wadankeenu noqon doono
Siyaasiyiintu waa niman isbadal doon ah oo kolba meel u wareegaya. Hadda shariifku si uu shaqada uga dhigo mid la heli karo, wuxuu muujiyey nin ku taagan rabitaanka dadka. Haddiise uu isbeddelo, wuxuu waayi doonaa kuwa badan oo uu jeclaa.
Qalinku waa masuuliyad in la dhaho hogaamiyaha wanaajiya waxaad dhahdaa waad wanaajisay, kan sameeyana inuu dhaho waad ka sii dartay. Marka, waxaan leenahay shariif maanta, waad hagaajisey oo waad ka sii socotaa halkaas. Labada qaybood ee kala qaybin doona Soomaaliya waxay la jiraan xisbiga aad hada hogaamineyso, Cali Maxamed Geedi: Inta aan lagu tuurin, is casil.
Hogaamiyaha Soomaaliya ayaa ka hor inta uusan u ambabixin magaalada Adis-ababa wuxuu lahaa magacyo dhowr ah oo uu ka xusho ragga uu u magacaabay raiisul wasaaraha. Laakiin booqashadaas kadib, waxaa liiskii la siiyay nin cusub oo aan xitaa horey u aqoon, Prof. Cali Maxamed Geedi. Waxaa lagula taliyay ama lagu qasbay inuu ka dhigo R / wasaaraha Soomaaliya.
Ma doonayo inaan ku idhaahdo qoraalkan sababta ay tani u dhacday. Waa markhaati laga wadawada-sarkaal waa nin cirka looga keenay, wuuna ogyahay. Mbgathi maalintii u horaysay ee uu xafiiska qabto waxay ahayd lix saacadood kadib markii loo dhaariyay xilka raysal wasaaraha Soomaaliya, isagoo ka tagay taariikh siyaasadeed. Hadaan intaas ku dhaafo, oo aan ku laabto wixii dhacay usbuucii hore, waxay noqon doontaa sidan. In la diido natiijada baarlamanka. Hanjabaad ah in meesha laga saaro dowladda iyo xubnaha muhiimka ah ee xalka Soomaaliya. In aan lagu abaalmarin waxtarka ay Itoobiya u fidisay bulshada Soomaaliyeed.
Waxaas oo dhami aniga ayaa iiga sii daran. Muuse Suudi wuxuu ku eedeeyay inuu hub ka qaatay Itoobiya, kadibna laayay dadka Soomaaliyeed, sidaasna sumcad ku helay. Waxaan weydiistay wax kasta oo kale oo aan dhinac iska dhigno, waxaan imaanno halkaan tilmaameynaa, R / Wasaaraha afkiisa oo ah hubka sooqaaday Itoobiya dadka ku dishay, hadana isla waqtigaas wuxuu leeyahay Itoobiya waa inay kaqaybqaadataa sidii hub looga samayn lahaa Aad ayaan uga sii necbahay kuwa dhahay dadkeyga waxaa lagu laayay hubkii lagala baxay, wuxuu leeyahay, waa na abaal mariyeen ee ma ahan ajar la siiyay.
Cali Maxamed Geeddi laba jeer ayaa baarlamaanka laga saaray, mar dowladdiisa loo diiday inay tahay mid aan sharci ahayn, iyo mar barnaamijkiisa la diiday. Waxaa la yaab leh inuu wali taagan yahay oo uu doonayo inuu noqdo Raiisel wasaare. Waa sheeko u baahan in laga fiirsado. Cali Geeddi ayaa shir jaraa’id ku qabtay guriga Hogaamiyaha waxna wuu ka yidhi, habeenki xigayna Madaxwaynuhu si kale ayuu u hadlay. dadka, ka dibna waxay codsadeen in laga laabto go’aanka baarlamaanka, oo ah xuquuqda dastuuriga ah ee Hogaamiyaha. Waa markii labaad ee uu Xaaji Geeddi sidan sameeyo, markii la tuurayna wuxuu sameeyey wixii uu doonayay ka dib wuxuu ku yidhi Hogaamiyaha dib ayaan kuu magacaabayaa.
Haddii uu rajo ka qabo siyaasadda, waxaa u fiicnaan lahayd inuu is casilo ka hor inta uusan fadhiisan maqaaxi ku taal Islii oo baarlamaanka laga tuuro. Midkoodna labada qaybood ee kala qaybin doona Soomaaliya ma sii jiri doono.
Fahad Yaasiin Xaaji DaahirMar 21, 2005Xigasho: SomaliTalk.com
HELAY? Cristiano Ronaldo ayaa ka mid ah
Ayaa ku qasbay xiddiga Arsenal inuu ka fariisto ciyaaraha?